Igumbi le-Roadrunner, elinendawo yokungena yabucala
Wamkelekile kwisuite yethu encinci eyenza isiseko esihle sokuhlola umntla-ntshona weArizona, okanye indawo yokuphumla xa udlula nje. Kuphela yimizuzu eli-15 ukusuka kwi-I-40, sikufutshane ngokwaneleyo edolophini ukuba sikulungele kodwa kude ngokwaneleyo ukuba sizole kwaye sibukeke, kwi-acre enegadi yendalo, iinkukhu, kunye namahashe.
Laughlin, NV-45 imizuzu
Grand Canyon West-75 imizuzu
Las Vegas-90 imizuzu
I-Kingman inendawo ephakathi kwedolophu ehlaziyiweyo kunye ne-craft microbreweries kunye namathuba okudlela awodwa.
Inebhedi eyindlovukazi, inomandlalo wamawele asongwayo kunye nepakethe yokudlala yabantu abahamba nabantwana abancinci. Inekhitshi elincinci elinefriji, i-microwave, i-oven yetoaster, umenzi wekofu, kunye neketile yombane.
Igumbi lokuhlambela linamampunge amakhulu esiko elinesinki yebha ukuze kube lula, kunye neshawari yethayile entle yesiko.
Kukho itafile enwebekayo enezitulo ezine zokutyela kwakho okuthuthuzelayo.
Ilungele abantu abadala ababini, ukuya kuthi ga kubantwana ababini. Akukho ntlawulo yabantwana. $ 10 ubusuku ngalinye umntu omdala wesithathu.
Sihlala kumakhaya kuphela kwindawo eneehektare ezikumantla edolophu yaseKingman. Kukho izinja kunye nemfuyo kwipropati yethu nakwiipropati ezikufutshane.
Ivenkile yegrosari eSafeway - 5.5 miles - 11 minute drive
Ukutya kukaFederico kwaseMexico - iimayile ezi-4.5 ukuya kwimizuzu eyi-9
IWalmart Supercenter - 6.6 miles - 13 minute drive
Interstate 40 - 6.9 miles - 14 imizuzu drive
Downtown Kingman - 10 miles - 20 imizuzu drive
Ndihlala ndibhala nje ukuba kukho into oyifunayo. Sihlala apha kwipropathi ke uzosibona siphuma siphuma ngomnyango ongasemva, kodwa siyakuhlonipha imfihlo yakho.